itnadamtui: Window7မှာ Linux တင်လို့မရတဲ့ ပြဿနာ
Window7မှာ Linux တင်လို့မရတဲ့ ပြဿနာ
Window7မှာ Linux Ubuntu တင်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် ဝေမျှပေးလိုက်တာပါ။ ကျွန်တော် အရင်ကတော့ Windows XP မှာ တင်ပြီ သုံးနေတာပါ။ မေးတဲ့ သူက Window7ဆိုလို့ ကျွန်တော့ သူငယ်ချင်း စက်မှာ ပထမ တင်ကြည့်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တင်လို့မရပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ OS က 32 bit ဖြစ်နေလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ 64 bit မှာတင်ကြည့်တော့ အဆင်ပြေသွားပါတယ်။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်စက်မှာဘဲ 32 bit နဲ့ တင်လို့ရအောင် ကြိုစားကြည့်တာ အဆင်ပြေသွားတယ်။ ဒါကြောင့် window732 bit (86 bit ) OS သုံးထားတဲ့ သူငယ်ချင်းများ Linux Ubuntu တင်လို့မရခဲ့ရင် အောက်ပါအတိုင်း Shrink Volume ဖန်းတီပြီ တင်ရအောင် လုပ်ဆောင်ရပါမည်.။
1. Start >> My computer ကို Right click ထောက်ပြီ Manage ကို Click လိုက်ပါ။
2. Storage အောက်က Disk Management ကို click လိုက်ပါ။ မိမိ Shrink Volume လုပ်မည့် Drive တစ်ခု ပေါ်မှာ Right click ထောက်ပြီ Shrink Volume ဆိုတာကို click လိုက်ပါ။
3. Shrink Box ကျလာပါမည်။ ဥပမာ- မိမိ မှုလ Hard Disk က 80 Gb ရှိတယ်ဆိုပါဆို မိမိက Linux တင်ဖို့ အတွက် 40 Gb ခွဲထုတ်မယ်ဆိုရင် 1024 * 40=40960 ရလာတဲ့ ဂဏန်းကို Enter The amount of space to shrink in MB မှာ ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။ပြီရင်တော့ Shrink ကို Click ပေးလိုက်ပါ။
4. Shrink ကိုနိုမ့်လိုက်တာနဲ့ အောက်ပါအတိုင်း တွေ့ရပါမည်။ Right click ထောက်ပြီ New Simple Volume ကို click လိုက်ပါ။
5. Next ကို ထပ် click လိုက်ပါ။
6. မိမိတို့ ရိုက်ခဲ့တဲ့ ဂဏန်းကို တွေ့ရပါမည်။ Next ကိုဘဲ click လိုက်ပါ။
7. ဒီနေရာမှာ မိမိက Driver Letter ကို မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ ထားချင်တယ်ဆိုရင် ရွေးချယ်လိုက်ပါ။ မထားချင်ဘူး ဆိုရင်လည် Next ကို နိုမ့်လိုက်ပါ။ နောက်မှ Drive Letter ကို ပြန်ပြောင်းလဲ ရပါတယ်။
8. Format This Volumes With the Following Setting မှာ File System မှာ NTFS ဖြစ်နေပါမည်။ မဖြစ်က ပြောင်းပေးလိုက်ပါ။ အခုနောက်ပိုင်းမှာ OS တွေမှာ NTFS ဘဲ သုံးပါသည်။ ( NTFS နဲ့ FAT အကြောင်းကို တင်ပြခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ) Allocation unit size မှာ Default ဖြစ်နေပါမည်။ ဒီတိုင် ထားလိုက်ပါ။ Volume Label မှာ Ubuntu လို့ရိုက်လိုက်ပါ။ မရိုက်လဲ ရပါသည်။ ကွဲပြားအောင် ရေးလိုက်တာပါ။ ပြီရင် Next ကို click လိုက်ပါ။
9. ပြီးရင်တော့ Finish ကို click လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် မိမိ တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ Shrink volume ကို Format ရိုက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် Wubi ကို Run ပြီ Ubuntu ကို Install လုပ်လိုက်ပါ။ ဘာပြဿနာမှ မတက်ဘဲ Linux ကို တင်နိုင်ပါပြီ။ (မှတ်ချက်။ ၊။Wubi နဲ့ Ubuntu Install လုပ်နည်းကို နောက် Post နဲ့ တင်ပေးပါမည်။ )အောက်မှာ Format ရိုက်ပြီတာကိုကြည့်လိုက်ပါ။ )
Indsendt af itnadamtui kl. 19.02